महादेव क्रोधमा मात्रै नभएर खुशीको शुभअवसरमा पनि ताण्डव गर्थे ! जन्नुहोस् रहस्य – Jagaran Nepal
महादेव क्रोधमा मात्रै नभएर खुशीको शुभअवसरमा पनि ताण्डव गर्थे ! जन्नुहोस् रहस्य
हिन्दूधर्ममा महादेवलाई देवका पनि देवको रुपमा पूजिन्छ । महादेवको थुप्रै प्रसंगहरु धर्मशास्त्रमा आउने गर्छन् । महादेव जब क्रोधित हुन्छन् , ताण्डव नृत्य गर्न थाल्छन् भनिएको छ । यसका साथै महादेवको ताण्डव शुरु भयो भने समस्त सृष्टिको नै विनाश हुने बताइन्छ । तर क्रोधमा मात्रै ताण्डव नगरी खुशीको शुभअवसरमा पनि भोलेनाथ ताण्डव गर्थे । ताण्डवको थुप्रै स्वरुप रहेका छन् । यससँग जोडिएका अनेक कथा प्रसंग पनि छन् । महादेवको ताण्डवको अर्थ र यससँग जोडिएका कथाबारे यहाँ उल्लेख गरिन्छ ।
महादेवको दुई स्वरुपलाई प्रमुख मानिन्छ । एक समाधी र अर्को हो ताण्डव । भगवान शिवको ताण्डवको सिलशिलामा दुई कथा विशेष चर्चित छ । माता सती भगवान शिवको साथमा आफ्ना पिता दक्षले आयोजना गरेको हवनमा सहभागी हुन आएकी थिइन् । उक्त हवनमा भोलेनाथको अपमान भएको देखेर माता सतीले अग्निमा हाम्फाली आत्मदाह गर्छिन् ।
यो घटनाबाट महादेव अत्यन्तै क्रोधित हुन्छन् र रुद्र ताण्डव गर्न शुरु गर्छन् । महादेवको उक्त ताण्डवका कारण पुरै सृष्टिमा प्रलय हुने परिस्थिति उत्पन्न भएको हुन्छ । कैलाश पर्वत उठाउने क्रममा हलचल हुँदा महादेवको ध्यान भंग हुन्छ । त्यहीँ झोंकमा क्रोधित बनेका महादेवले आफ्नो पञ्जा कैलाश पर्वत माथि राख्छन् । जसले गर्दा रावणको हात कैलाश पर्वत मुनी दबिन्छ र दुखाईले उनी तड्पिन थाल्छन् । यसबाट रावणमा गल्तिको महसुस हुन्छ र उनको घमण्ड पनि टुट्छ ।
त्यसपछि रावणले भोलेनाथलाई प्रसन्न पार्न शिव ताण्डव स्त्रोत्र गाउन शुरु गर्छन् । यही संगीतको माध्यमबाट महादेवको महानताको बयान गरिएको छ । आफ्नो लागि यति सुमधुर संगीत सुनेपछि महादेव रावणसँग प्रसन्न हुन्छन् । त्यसपछि भने महादेवले कैलाश पर्वतमाथि राखेको आफ्नो पञ्जा हटाउँछन् । त्यसैले लंकेश रावणलाई शिव ताण्डवको रचयिता मानिन्छ ।
खुशीमा पनि महादेव गर्थे ताण्डव; अधिकांश मानिसमा महादेवले क्रोधमा मात्र ताण्डव गर्थे भन्ने भ्रम हुन सक्छ । जति बेला महादेव अत्यन्त खुशी हुन्थे त्यस बेला पनि ताण्डव गर्ने गर्थे । खुशीमा शिव आनन्द ताण्डव गर्दथे । जसबाट पूरै वातावरण मनमोहक हुने गथ्र्यो । यसका साथै त्रिपुरा, संध्या, समरा, काली, उमा पनि ताण्डवकै प्रकार हुन् । जुन ताण्डव महादेवले विभिन्न अवस्थामा गर्ने गर्थे ।ताण्डव भित्र पूरै सृष्टिको सारांश समावेश भएको छ । यसले मृत्यु, जन्म, विनाश, रचना सबैलाई दर्शाएको छ ।